Fivorian’ny frankofonia : hovitaina ao anatin’ny 10 volana ireo fotodrafitrasa lehibe | NewsMada
Fivorian’ny frankofonia : hovitaina ao anatin’ny 10 volana ireo fotodrafitrasa lehibe
Nanome toky ny filohan’ny Conseil national d’orientation, Ratsiferana Hugues, miaraka amin’ny minisi-panjakana misahana ny tetikasan’ny fiadidiana ny Repoblika sy fotodrafitrasa, Rakotovao Rivo, fa ho vita ara-potoana ny asa rehetra ho fandraisana ny fivoriana an-tampony faha-16 ireo firenena mampiasa teny frantsay iraisam-pirenena lehibe izany.
Manana 10 volana ny mpikarakara fandraisana ny fivoriana an-tampony ny frankofonia, hanaovana ireo fotodrafitrsa lehibe rehetra, mialoha ny fivoriana amin’ny volana novambra. Asa iray lehibe amin’izany ny fananganana trano eo anilan’ny CCI Ivato handraisana ireo filoham-panjakana ; eo ihany koa ny hanamboarana toerana hahazoana mandray helikoptera roa, fotodrafitrasa lehibe iray ny fanamboaran-dalana.
Ankoatra ireo, efa tafiditra ao anatin’ny tetikasan’ny fiadidiana ny Repoblika ny fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, fanamboarana fiantsonan’ny fiara mpitatitra amin’ny zotra nasionaly eny Ambodivona sy Fasan’ny Karana, miaraka amin’izany koa ny fanamboaran-dalana eto an-dRenivohitra. « Tsy maintsy tsinjovina ny hoavy aorian’ny fahavitan’ny fivoriana, antony namaritana tetikasa maro, toy ny village de francophonie », hoy ny minisitra Rakotovao Rivo.
20 miliara Ar ny tetibola atokan’ny fitondram-panjakana handraisana ity fivorian’ny tany mampiasa teny frantsay ity, tafiditra ao anatin’ny tetibolam-panjakana 2016 ary manampy izany koa ireo firenen-kafa. Nanamafy izany, ohatra, ry zareo Kanadianina, nandritra ny fihaonan’ny ambasadaoro Philippe Baulne, sy ireo delegasiona niaraka taminy tamin’ny filoha Rajaonarimampianina Hery ny faran’ny herinandro lasa teo.